Perito Moreno Glacier: astaamaha, cimilada, dhirta iyo xayawaanka | Saadaasha Shabakadda
Adduunkeenna waxaa ku jira yaabab dabiici ah oo mudan in la arko. Mid ka mid ah ayaa ah Perito Moreno Glacier. Waa baraf aad u tiro badan oo ku yaal gobolka Santa Cruz oo ku dhex jira Beerta Qaranka ee Los Glaciares. Isbedelka cimiladu wuxuu isbedello daran ku keenayaa barafkan oo dib ayuu u noqonayaa.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato Perito Moreno Glacier, astaamahiisa, qaab dhismeedkiisa iyo muhiimadiisa.
2 Cimilada Perito Moreno Glacier
3 Flora iyo fauna ee Perito Moreno Glacier
4 Dillaaca iyo go'itaanka
Hordhaca dhismahan weyn ee barafka wuxuu matalayaa Brazo Rico laga helay harada Argentino. Waxay gaari kartaa dherer dhan 30 mitir inta ka hartay harada inteeda kale, iyadoo cadaadis xoog leh saareysa barafka halkaas ku jira.
Waxaad arki kartaa tunnel leh vault of in ka badan 50 mitir halkaasoo ay biyuhu ka soo qulqulayaan ilaa ay ka gaarayaan harada Argentino. Nabaad guurka meeshan ka dhasha awgeed, keydku aakhirka wuu dumaa. Tani waa mid ka mid ah bandhigyada cajiibka ah ee laga markhaati kici karo, waana sababta ay dalxiisayaashu u bixiyaan lacag aad u tiro badan si ay ugu awoodaan inay dhaafaan xitaa haddii aysan waligood taariikh yeelan
Waa geedi socod dabiici ah oo soo noqnoqod aan caadi ahayn sanadihii la soo dhaafay. Burburintii ugu dambeysay ee la duubay waxay dhacday Maarso 2016. Bishii Maarso 2018, waxaa jiray nasasho cusub Perito Moreno Glacier, laakiin waxay dhacday waaberigii. Nasiib darrose, lama heli karo sawirro ama diiwanno fiidiyoow ah oo la xiriira dhacdada maxaa yeelay beerta ayaa xirneyd xilligaas mana jirin markhaati ama markhaati.
Maalin uun ka hor inta uusan dillaacin, glacier-ka ayaa lumiyay saddex meelood labo meelood oo muggiisa ah, taas oo muujineysa in sanadkaas (2018) arrintani ay aad uga dhakhso badan tahay sanadihii hore, laakiin wali wax cadeyn ah majiraan. Tan waxaa u sabab ah kuleylka adduunka iyo isbeddelka cimilada oo dhacay dhowr sano.
Qaar ka mid ah saynisyahannada oo bartay muddo dheer Perito Moreno Glacier waxay hubaan in xaqiiqadani ay iska timid oo aysan wax shaqo ah ku lahayn waxa ka dhacaya deegaanka, maxaa yeelay barafleyda weligood lama tusin inay saameyn ku leeyihiin isbeddelka cimilada, iyo xitaa markii barafku dhaqaaqay oo yaraaday.
Cimilada Perito Moreno Glacier
Cimilada ayaa qalalan oo qabow, iyo roobabka sanadlaha ah waa 300 mm oo keliya. Si kastaba ha noqotee, jardiinada caanka ah ee qaranka, waxay ku taal meel wax yar u jirta galbeedka halkaas oo uu ku yaal Perito Moreno Glacier, roobabkuna aad bay hodan u yihiin, qiyaastii 1500 mm sanadkiiba.
Marka la barbardhigo plateau Patagonian-ka ay ka tirsan tahay, in badan oo ka mid ah deegaanno u gaar ah ayaa siiya microclimate fudud. Waxay ku taal xeebta harada Argentino, oo ah meel u janjeedha dhinaca woqooyi oo ay ilaaliyaan kaymaha horusocodka ah. Cimiladu waa qalalan tahay heerkulkuna wuu isbedelaa inta u dhexeysa in ka badan 20º C xagaaga iyo in ka yar -3º C xilliga qaboobaha.
Heerkulku aad ayuu u kala duwan yahay waxayna kuxirantahay waqtiga sanadka, maadaama xagaaga aad ku raaxeysan karto ilaa 17 saacadood oo iftiin ah, halka xilliga qaboobaha uu aad uga gaaban yahay, oo kaliya 8 saacadood.
Flora iyo fauna ee Perito Moreno Glacier
Qiyaastii 260.000 hektar oo baarkani ah ayaa daboolay baraf, sidaa darteed ma jiraan wax dhir ah, iyo qiyaastii 95.000 oo hektar ayaa sidoo kale daboolay harooyinka. Dhamaan aagga dhirta leh ee jardiinadu waa qiyaastii 79.000 hektar, kuwaas oo cherry, ñire iyo lenga ay xukumaan.
Dhirta laga helay Beerta Qaranka ee Los Glaciares waxay u dhigantaa gobolka koonfurta ugu dhow ee Magallanes. Noro waa mid ka mid ah geedaha ugu caansan, waxay leedahay ubax casaan qurux badan. El Calafate oo leh miro guduud ah iyo ubaxyo huruud ah ayaa ah mid aad u wanaagsan, halka meelaha hawo badan leh, uumiga shaydaanka caan ku ah.
Marka laga hadlayo xayawaanka, baarkinkaan waxaa ku yaal noocyo gaar ah oo ku yaal dhul daaqsimeedka iyo keymaha hoose. Wuxuu xukumaa jiritaanka gorgorka madow, gorgorrada, guanacos, choiques iyo pumas. Macluumaad badan lagama oga waxa ku saabsan noolaha laf dhabarta ah ee ku nool beertadan oo dhan. Inta badan macluumaadka noocaas ah waxaa laga helaa shimbiraha.
Dillaaca iyo go'itaanka
Dillaaca barafkan ayaa ka mid ah muraayadaha dabiiciga ee ugu caansan. Si kastaba ha noqotee, ma jiro halbeeg xilliyeed oo awood u leh inuu ogaado marka ay tahay xilligii nasashada. Dalxiisayaal badan ayaa bixiya lacag aad u tiro badan si ay u arkaan nasashada, in kastoo aysan si dhab ah u ogeyn goorta ay noqon doonto.
Barafkan waxaa la booqan karaa wakhti kasta oo sanadka ah. Waxay kuxirantahay waqtiga sanadka aad booqato, waxaad kuheli doontaa siyaabo kala duwan, kuwo gaar ah oo aad ufiican. Si kastaba ha noqotee, Waa in la ogaadaa in cimilada barafka ku taal ay tahay mid qabow oo qalalan inta badan.
Waa muhiim in la tixgeliyo heerkulka, maxaa yeelay bilaha jiilaalka ee Juun ilaa Ogosto dadku uma baran inay qabow qabow tahay, marka lagu daro xaqiiqda ah in maalmuhu sida caadiga ah ay gaaban yihiin oo dhammaan howlaha madadaalada bannaanka aysan suurtagal ahayn. Celceliska heerkulka waa -2º C. Xilliga jiilaalka, waxaad ku raaxeysan kartaa masawirka barafka lagu daboolay, sidoo kale waad ku raaxeysan kartaa kuna ciyaari kartaa barafka. Xilliga kuleylaha inta udhaxeysa Diseembar iyo Maarso, heerkulku si lama filaan ah ayuu isu beddelaa illaa 15ºC.
In badan oo ka mid ah 49 baraf oo ka kooban koonfurta Patagonia waxay bilaabeen inay dib u noqdaan 50-kii sano ee la soo dhaafay. Tan waxaa sababa isbeddelka cimilada waana mas'uuliyadda guud ee aadanaha, maxaa yeelay waa dadka sababa dhibaatooyinka deegaanka una sababa kuleylka adduunka. Perito Moreno Glacier waa mid ka mid ah barafleyda yar ee aan ku dhalaalin xaaladaha kuleylka adduunka iyo isbeddelada deegaanka. Sidoo kale ma korto 3 mitir maalin kasta sida ay aaminsan yihiin maxalliga ah. Barafkan wuxuu marayaa meerto isu-uruuris iyo isugeyn ah oo ilaalinaysa isu-dheelitirnaan dhammaystiran inta hawshu socoto.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto Perito Moreno Glacier, astaamahiisa iyo saameynta suurtagalka ah ee isbeddelka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Perito Moreno Glacier
Pyrocumulonimbus iyo hirarka kuleylka ee Kanada
Sidee loo soo saaraa roobka aashitada?